संवैधानिक इजलासमा भएको आजको सुनुवाई हेर्दाहेर्दैमा, बहस भोलि मँगलबारका लागि तय
जबरजस्ती करणी तथा डाँका कसूरका फरार अभियुक्त पक्राउ
ए ! युवा हो हाम्रो भेडोपनको अन्त्य कहिले होला त अब?
नेकपाले माघ २३ गते काठमाडाैँमा दुई लाख नागरिक सडकमा उतार्ने
रावलको गढमा ओली हावी, अछाममा पूर्व एमालेका अधिकांश अगुवा नेता ओली समूहमा
रहेनन् गन्धर्व संस्कृतिका धरोहर गायक
कोटेश्वर-कलङ्की सडकमा ट्राफिक बत्ती जडान गरिने
#निर्वाचन आयोग # नेकपा
# केपी शर्मा ओली, #पुष्पकमल दाहाल
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५४औं साधारण सभा
नेपालगाथा २०७७ मंसिर १४ गते आइतबार ०७:२९:५७ मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्र ढकाल निर्वाचित भएका छन् । शनिबार भएको निर्वाचनमा ढकालले किशोर प्रधानलाई पराजित गरे । वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने प्रावधान रहेको महासंघमा यससँगै ढकालले अर्को कार्यकाल निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको नेतृत्व गर्नेछन् । महासंघमा आवद्ध भएको एक दशकमै ढकाल उक्त संस्थाको नेतृत्वमा पुगेका छन् ।
उनीसँग महासंघका जिल्ला, नगरतर्फबाट उपाध्यक्ष रहेका किशोर प्रधानले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । सबैभन्दा बढी अर्थात् ५० प्रतिशत मतभार हुने जिल्ला नगरको भोटमा प्रधानलाई बराबरी जसोमा रोक्न सफल भएपछि एशोसिएट र वस्तुगततर्फको भोटबाट प्रधानलाई पछाडि पारे । जिल्ला नगरमा ढकालले ५२ र प्रधानले ५३ मत ल्याएका थिए ।
९२३ मत हुने एशोसिएटमा ढकालले आफ्नो पकड राम्रो देखाएका छन् । उनी यसअघि एशोसिएटबाट निर्विरोध उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । ढकालले एशोसिएटतर्फका आफ्नो प्यानलका उपाध्यक्षका उम्मेद्वार रामचन्द्र संघईलाई पनि विजयी गराएका छन् । ढकालले एशोसिएटबाट ५२२ मत ल्याए भने प्रधानले ३७५ मत ल्याएका थिए । एशोसिएटको मतभार वरिष्ठ उपाध्यक्षको निर्वाचनमा ३० प्रतिशत हुन्छ । त्यस्तै, २० प्रतिशत मतभार गणनाा हुने वस्तुगत तर्फको मतमा पनि ढकालले ५२ र प्रधानले ३९ मत ल्याए ।
निर्वाचित भैसकेपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिदैं ढकालले, ‘निर्वाचनको क्रममा प्यानलगत विभाजन मतदानसँगै समाप्त भएको र अब निजी क्षेत्रका साझा मुद्दामा हिंड्ने’ बताए ।
महासंघको जिल्ला नगरतर्फको उपाध्यक्षमा भने दिनेश श्रेष्ठ विजयी भएका छन् । श्रेष्ठ यसअघि काठमाडौं जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष थिए भने महासंघमा अघिल्लो निर्वाचनमा जिल्ला, नगरतर्फको उपाध्यक्षको निर्वाचनमा पराजित भएका थिए ।
एशोसिएटमा प्रधानको प्यानलबाट उपाध्यक्षको उम्मेद्वार बनेका सौरभ ज्योतिले भने निर्वाचनमा पराजित भए । एशोसिएट समूहको मतमा होल्ड भएका ढकालले आफ्नो प्यानलका उपाध्यक्ष संघईलाई जिताएका छन् ।
वस्तुगत समूहबाट उपाध्यक्षमा अञ्जन श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् ।
घट्यो सुनको भाउ, तोलाको कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
सुनको मुल्यमा सामान्य गिरावट
तोलामा ६ सयले बढ्यो सुनको मुल्य
आईपीओमा नयाँ रेकर्ड : १५ लाख ३० हजारले दिए आवेदन
एनसेलको बिजप्लस प्लान, यस्ता छन् सुविधा
हाम्रो टिम विज्ञापन सम्पर्क सुचना विभाग दर्ता नम्बर: ५८८/०७४-७५ © 2021 Nepalgatha.com. Design & Developed BySuresh Khadka